လူထု၏ ငြင်းပယ်ခြင်းခံရသောခရစ်တော် | Christ – Rejected by the Masses | Real Conversion
(ဟေရှာယ ၅၃ ထဲက ၃ခုမြောက် ဒေသနာတော်)
၂၀၁၃ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၀ရက်နေ့၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၊
တဲတော်နှစ်ခြင်းအသင်းတော် သခင်ဘုရား နေ့၊ နံနက်ပိုင်းဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌
Lorde’s Day Morning, March 10, 2013
“ငါတို့ဟောကြားသော သတင်းစကားကို အဘယ်သူယုံသနည်း။ ထာ၀ရဘုရား၏ လက် တော်သည် အဘယ်သူ့အားထင်ရှားတော်မူသနည်း။ ထာ၀ရဘုရား၏ ကျွန်သည် အညွန့်ကဲ့ သို့၎င်း၊ ခြောက်သွေ့သောမြေ၌ ပေါက်သောအတက်ကဲ့သို့၎င်း၊ ရှေ့တော်၌ကြီးပွား၏။ ပမာ ဏပြုစရာ အဆင်းတင့်တယ်ခြင်းမရှိ။ ချစ်လိုဖွယ်သောမျက်နှာလက္ခဏာနှင့် မပြည့်စုံ။” (ဟေရှာယ ၅၃း၁-၂)။
ဟေရှာယ ပြောကြားသည်မှာ၊ ထာ၀ရဘုရား၏ ကျွန်ခံရသော ဒုက္ခဝေဒနာနှင့် ကျေးဇူးဂရုဏာ တော်ကို လူအနည်းငယ်စုကသာလျှင် လက်ခံယုံကြည်ကြမည်ဟု ဆိုထား၏။ ခရစ်တော်ဤလောက၌ အသက်ရှိထင်ရှားစဉ်တွင် တမန်တော်ရှင်ယောဟန်သည် ဟေရှာယ ၅၃း၁ကို ကိုးကားပြီး ဂျူးလူတို့ မယုံကြည်မှုနှင့်ပါတ်သတ်၍ ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။
“ထိုမျှလောက်ကြီးစွာသော နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကို သူတို့မျက်မှောက်၌ ပြတော်မူတော်လည်း၊ သူတို့သည် ယုံကြည်ခြင်းသို့ မရောက်ကြ၊ ပရောဖက်ဟေရှာယ ဟောဖူးသည်ကား၊ အို ထာ၀ရဘုရား အကျွန်ုပ်တို့ ဟောပြောသော သတင်းစကားကို အဘယ်သူအား ထင်ရှား တော်မူသနည်း ဟူသောစကားသည် ပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်သတည်း”။ (ယော ၁၂း၃၇-၃၈)။
ခရစ်တော်ဘုရား ကောင်းကင်ဘုံသို့ ရူအးကချီတော်မူပြီးနောက် နှစ်၃၀တွင်၊ အနည်းငယ်သောတပါး အမျိုးသားတို့ ခရစ်တော်ယေရှုအား ယုံကြည်ခြင်းသို့ ဦးလှည့်ကြလာမည်ကို တမန်တော်ရှင်ပေါလုက ၎င်းကျမ်းကို ကိုးကားပြီး၊ ဖော်ပြခဲ့သည်။ ရှင်ပေါလုမိန့်တော်မူသည်ကား၊
“ယုဒအမျိုး၊ ဟေလသအမျိုးကိုမရွှေး၊ ကိုယ်တော်ကို ပဌာနာပြုသော လူအပေါင်းတို့၌ ကျေး ဇူးရူအးကယ်၀တော်မူ၏။ သို့သော် လူအပေါင်းတို့သည် ဝမ်းမြောက်စရာသတင်းကို နားထောင် ကြသည်မဟုတ်၊ ပရောဖက်ဟေရှာယစကားဟူမူကား အိုထာ၀ရဘုရား ကျွန်ုပ်တို့ဟောသော သတင်းစကားကို အဘယ်သူယုံပါသနည်း? (ရောမ ၁ဝး၁၂၊ ၁၆)။
သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ထိုကဲ့သို့ မိန့်တော်မူခဲ့ပါသည်။ ယုံကြည်သောသူတို့သည် အရေ အတွက်နည်းကြမည်ဟု မိန့်တော်မူခဲ့ပါသည်။
“အသက်ရှင်ခြင်းသို့ ရောက်သာလမ်းနှင့်တံခါးသည် အလွန်ကျဉ်းမြောင်းသည်ဖြစ်၍ တွေ့ ဝင်သောသူတို့သည် နည်းကြ၏”(ရှင်မဿဲ ၇း၁၄)။
“ကျဉ်းမြောင်းသောတံခါးကို ဝင်းခြင်းငှါ၊ ကြိုးစားအားထုတ်ကြလော့။ အကြောင်းမူကား အများသောသူတို့သည် ဝင်ခြင်းငှါအလိုရှိသော်လည်း မစွမ်းနိုင်ကြဟု ငါဆို၏”(လုကာ ၁၃း၂၄)။
ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးရှိ ယုံကြည်သူများ ကောင်းကင်ချမ်းသာကို ဝင်စားလိုသော်လည်း၊ ယေရှု မိန့်တော်မူသည်ကား၊
“တွေ့ဝင်သောသူတို့သည် နည်းကြ၏”(မဿဲ ၇း၁၄)။
“အများသောသူတို့သည် ဝင်ခြင်းငှါအလိုရှိသော်လည်း မစွမ်းနိုင်ကြဟု ငါဆို၏”(လုကာ ၁၃း၂၄)။
အဘယ်ကြောင့် ထိုသို့ဖြစ်လာရသနည်းဟု မေးခွန်းထုတ်စရာရှိသည်။ ဂျူးလူမျိုးတို့သည် မေရှိယသခင်တည်းဟူသော တန်ခိုးရှင်မင်း၊ ခန့်ညားပြီး ချမ်းသာ၍ဥစ္စာဓနနှင့် ပြည့်စုံသောဘုရင်ကို ရှာဖွေခဲ့ကြသည်။ တပါးအမျိုးသားတို့မူကား မေရှိယသခင်ကို မရှာဖွေခဲ့ကြပေ! လူသားအပေါင်းတို့ သည် အစေခံကျွန်ခံလျှက် လူသားတို့၏အပြစ်အတွက် ခရစ်တော်သည် လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ အသေခံ ပြီးရူအးကလာမည်ဟု မျော်လင့်ခဲ့ကြသည်မဟုတ်ပါ။ တမန်တော်အခန်းကြီး ရှစ်တွင်၊ အဲသယောပိပြည် အမတ်သည်လည်း ယုဒဘာသာဝင် ဖါရိရှဲနှင့်ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့အလား အကန်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုအ မတ်သည် ဟေရှာယ အခန်းကြီး ၅၃ကို ဖတ်နေခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် ဧဝံဂေလိဆရာ ဖိလိပ္ပုလည်း ထိုအမတ်နှင့်အတူ ရထားစီးလာခဲ့ကြ၏။
“ဖိလိပ္ပုသည် ရထားသို့ပြေး၍ ပရောဖက်ဟေရှာယကျမ်း၌ ဖတ်သည်ကိုကြားလျှင်၊ ဖတ် သောအရာကို နားလည်ပါ၏လော့ဟု မေးမြန်း၏။ ထိုအမတ်ကလည်း သွန်သင်ပဲပြင် သောသူလျှင် . . .”(တမန်တော် ၈း၃၀-၃၁)။
Þဤအာဖရိကလူတဦးသည် ယုဒဘာသာဝင်တစ်ဦးအဖြစ် ပြောင်းလဲလာခဲ့သည်။ ဓမ္မကျမ်းဟောင်း ကျမ်းနှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သောသူဖြစ်သည်။ ဂျူးကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဲ့သို့ မျက်စိကန်းလျှက်၊ သမ္မာ ကျမ်းစာ၏ အနက်အဓိပ္ပါယ်ကို နားမလည်ခဲ့ပါ။
သမ္မာကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်း မေရှိယသခင်သည် စည်းစိမ်ချမ်းသာနှင့် ကျော်ဇောကိတ္တိ ဖြစ်လျှက် ရူအးကလာခြင်းမဟုတ်ခဲ့ပေ။ လူသားတို့၏ အထင်ကြီးခံရခြင်း၊ လေးစားမှုကို မရရှိခဲ့ပါ။ ကိုယ်တော်သည် “ငြိုငြင်ခံရသောသူ၊ နားကြည်းခြင်းဝေဒနာနှင့် ကျွမ်းဝင်သောသူ၊”“သူတပါးမျက်နှာ လွဲခြင်းကို ခံရသောသူ”သာလျှင်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့သော အမှန်တရားကို သမ္မာကျမ်းစာ၌ ရေးသား ဖော်ပြထားပါသည်။
“ သူသည် မိမိဒေသအရ ပ်သို့ ရူအးကလာသော်လည်း၊ Þလောကသည် ထိုသူကိုမသိ”(ယောဟန် ၁း၁၁)။
ဂျူးလူမျိုးများ ယေရှုအား မေရှိယသခင်ဖြစ်သည်ကို လက်မခံခဲ့ပေ။ ပရောဖက်ကျမ်းများ၌ ထိုသို့နှိမ့်ချခြင်းဖြင့် ရူအးကလာမည်ဟု ဖော်ပြသော်လည်း ယေရှုကိုလက်မခံခဲ့ပါ။ ပရောဖက်ကြီးက အခန်းငယ် ၂၌ အဘယ်ကြောင့်ငြင်းပယ်ခြင်းခံရသည်ကို ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါသည်။
“ထာ၀ရဘုရား၏ ကျွန်သည် အညွန့်ကဲ့သို့၎င်း၊ ခြောက်သွေ့သောမြေ၌ ပေါက်သောအတက် ကဲ့သို့၎င်း၊ ရှေ့တော်၌ကြီးပွား၏။ ပမာဏပြုစရာ အဆင်းတင့်တယ်ခြင်းမရှိ။ ချစ်လိုဖွယ် သောမျက်နှာလက္ခဏာနှင့်မပြည့်စုံ။”(ဟေရှာယ ၅၃း၁-၂)။
ခရစ်တော်ကို ငြင်းပယ်ကြသောဂျူးလူတို့အား အပြစ်တင်စီရင်ခြင်းမပြုကြစို့။ အကြောင်းမှာ တပါးအမျိုးသားတို့သည်လည်း ကိုယ်တော်ကိုငြင်းပယ်နေကြသည်။ စပါဂျန်ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊
ဂျူးလူတို့ငြင်းပယ်သကဲ့သို့ တပါးအမျိုးသားတို့လည်း ငြင်းပယ်ကြသဖြင့် အတူတူပင်ဖြစ် ကြ၏။ ယေရှုခရစ်တော်၏ ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းသည် အလွန်ရိုးရှင်းလှပါသည်။ သို့ သော်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်က သွန်သင်ခြင်းမရှိဘဲ နားလည်နိုင်ခြင်းမရှိကြပါ။ အပြစ် သည် စိတ်နှလုံးသားထဲ၌ သန္ဓေတည်ပြီး ဝိညာဉ်သေဆုံးခြင်းအထိ ကူးစပ်လာရခြင်းဖြစ် သည်။ မိတ်ဆွေ၌ အဘယ်သို့သေခြင်းရှိလာရသနည်း?သင်သည် မျက်ကန်းတစ်ယောက် လား? အကယ်၍ ထိုသို့ဖြစ်နေလျှင်၊ ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်လာဖို့ ဘုရားသခင်သွန်သင် ဆုံးမပေးပါစေသော်။ (C.H. Spurgeon, "A Root out of Dry Ground," The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1971 reprint, volume XVIII, pages 565-566).
ယခု ကျွန်ုပ်တို့ရွှေကျမ်းပိုဒ်အငယ် နှစ်ထဲသွားကြစို့၊ အဘယ်ကြောင့် ယေရှုငြင်းပယ်ခြင်းခံရ သည်ကို အချက်သုံးချက်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ အသံကျယ်လောင်စွာဖြင့် အငယ်နှစ်ကို ဖတ်ကြပါစို့။
“ထာ၀ရဘုရား၏ ကျွန်သည် အညွန့်ကဲ့သို့၎င်း၊ ခြောက်သွေ့သောမြေ၌ ပေါက်သောအ တက်ကဲ့သို့၎င်း၊ ရှေ့တော်၌ကြီးပွား၏။ ပမာဏပြုစရာ အဆင်းတင့်တယ်ခြင်းမရှိ။ ချစ်လို ဖွယ်သောမျက်နှာလက္ခဏာနှင့် မပြည့်စုံ။”(ဟေရှာယ ၅၃း၁-၂)။
၁။ ပထမ၊ ခရစ်တော်သည် ငြင်းပယ်ခြင်းကို ခံရသည့်အကြောင်းမှာ၊ အညွန့်ကဲ့သို့ အတက် ကဲ့သို့ ရူအးကလာခြင်းကြောင်းဖြစ်၏။
ဤသို့သော အကြောင်းအရာကြောင့် လူတို့တွင် အနည်းငယ်သာ ကိုယ်တော်ကို ယုံကြည်ရခြင်း ဖြစ်သည်။
“ထာ၀ရဘုရား၏ ကျွန်သည် အညွန့်ကဲ့သို့၎င်း၊ ရှေ့တော်၌ကြီးပွား၏။ (ဟေရှာယ ၅၃း၁-၂)။
ဒေါက်တာ ဂျွန်ဂီးလ် ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ “မျော်လင့်စရာမရှိ၊ သစ်ပင်အမြစ်၌ အတက်ပေါက်လာ ခြင်းလည်းမဟုတ်၊ သွေ့ခြောက်သောမြေ၌ ပေါက်သောအတက်ကလေး”ဟူ၍ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဤသို့ခိုင်းနှိုင်းပြောကြားခြင်းသည် နှိမ့်ချလျှက်၊ ရူအးကလာခြင်းကတိတော် မျော်လင့်ခြင်းအခွင့်နှင့် မဆိုင် သောဖွားမြင်ခြင်းကို ဖြစ်စေခဲ့၏။ ထိုအချက်ကြောင့် ဂျူးလူတို့သည် ကိုယ်တော်အား ငြင်းပယ်ရှုပ်ချခဲ့ သည်”။ (John Gill, D.D., An Exposition of the Old Testament, The Baptist Standard Bearer, 1989 reprint, volume I, pp.310-311).
၎င်းကျမ်း၏ ဆိုလိုရင်းသည်၊ ခမည်းတော်ဘုရားသခင် “ရှေ့တော်”၌ ခရစ်တော်သည် အစဉ်ကြီး ပွါးလာခြင်းကို ဖော်ပြသည်။ ဒေါက်တာယန်းပြောကြားသည်မှာ၊ “ယေရှုသည် အတက်၊ အညွန့်ပမာ လူတို့တွင် ထင်ရှားခဲ့သည်။ လူသားအနေဖြင့် အညွန့်ကိုကိုက်ဖြတ်ပြီး အသက်မရှိနိုင်တော့သဖြင့် လွင့်ပစ်ရုံသာဖြစ်သည်ဟု ထင်ရ၏”(Edward J. Young, Ph.D., The Book of Isaiah, William B, Eerdmans Publishing Company, 1972, volume 3,pp. 341-342).
ထို့အတွက်ကြောင့် ဖါရဲရှိနှင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည် ယေရှုကို ဖယ်ရှားလိုခြင်းမဟုတ်ပါလား? ထိုသူတို့က၊
“သူ့ကို ဤသို့လွတ်ထားလျှင် လူခပ်သိမ်းတို့သည် ယုံကြည်ကြလိမ့်မည်။ ရောမလူတို့ သည်လည်း လာ၍ငါတို့အရပ်ဌာနကို၎င်း၊ ငါတို့အမျိုးကို၎င်း သုတ်သင်ဖယ်ရှင်းလင်းကြ လိမ့်မည်ဟု ပြောဆိုကြ၏”(ရှင်ယောဟန် ၁၁း၄၈)။
လူသားတို့အမြင်မှာ၊ “အညွန့်ကို ကိုက်ဖြတ်မည်ဆိုလျှင်၊ အသက်မရှင်တော့သဖြင့် ပစ်လိုက်ရုံသာ ရှိသည်ဟု ထင်ကြသည်”(Young, ibid.). အကယ်၍ ကိုယ်တော်ကို ယုံကြည်မည်ဆိုလျှင် မူလအတိုင်း အခက်ဖြစ်သော မိမိတို့လူမျိုးဇာတိ မျိုးသုန်းသွားမည်ကို ကြောက်ရွှံ့ခဲ့ကြသည်။ “အညွန့်အတက် ပမာ”မိမိတို့ဇာတိမျိုးသုန်းသွားမည်ကို ကြောက်ရွှံ့ခဲ့ကြသည်။
သင်လည်း ထိုသူတို့ကဲ့သို့ ကိုယ်တော်ကို ငြင်းပယ်ခဲ့သည်မဟုတ်ပါလား? နက်နဲ့စွာတွေးတော ကြည့်ပါ! အကယ်၍ ကိုယ်တော်ကို ယုံကြည်မည်ဆိုလျှင်ဟူသော တစ်စုံတရာဆုံးရှုံးရမည်ကို ကြောက်ရွှံ့နေသည် မဟုတ်ပါလား? အကယ်၍ခရစ်တော်ကို သင်ယုံကြည်လျှင်၊ သင့်အဖို့အရေးပါ သည်ဟူသောအချက် “မိမိဇာတိဆုံးရှုံး”နုတ်ပယ်ခြင်းခံရမည်ကို သင်ကြောက်ရွှံ့နေသည်မဟုတ်ပါ လား?
၁၉၂၉ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလထုတ် ဓွှ့န Sအေကမိပေ နလနညငညါ ဏသျအ” ကို ဒေါက်တာ ကေကန်ထံက ယူ၍ ဖတ်ကြားခဲ့ပါသည်။ ၎င်းစာစောင်၌၊ ဆေးပါရှုဂူဒေါက်တာ အာဘတ်အိန်းစတိန်းနှင့် အမေးအ ဖြေကဏ္ဍကို တွေ့ရပါသည်။ မေးမြန်းသောသူက “ယေရှုအမှန်တည်ရှိခြင်းဟူသော သမိုင်းကို သင်ယုံ ကြည်ပါသလား?”ဟူ၍မေးမြန်းခဲ့ပါသည်။ ထိုအခါ အိန်းစတိန်းက “အသေအချာပါပဲပါပဲ ဟူ၍ ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။ ယေရှုတည်ရှိခြင်းကို မယုံကြည်ဘဲ သတင်းကောင်းကျမ်းကို ဖတ်၍မဖြစ်နိုင်ပေ။ ကျမ်းစကားတစ်ခွန်းတိုင်း၌ ယေရှုသက်ဝင်လုပ်ရှားနေ၍ ဖြစ်သည်။ အသက်တည်းဟူသော နုတ်ထွက် စကားဖြစ်၏၊ ဒဏ္ဍာရီမဟုတ်ပေ။”(The Saturday Evening Post, October 26, 1929, p. 117). အိန်းစတိန်းသည် ခရစ်တော်၏တရားကို လေ့ကျက်သောသူဖြစ်သည်။ ဝမ်းနည်းစရာကောင်းသည်မှာ သူကိုယ်တိုင်အသက်တာမပြောင်းလဲခဲ့ပေ။ မည်သည့်အရာက တားဆီးနေပါသနည်း? မိမိ၏အသိ ညဏ်ပညာအားဖြင့် ဆီးတားခံရခြင်းလည်း မဟုတ်ပါ။ မိမိ၏အပြစ်ကို ဝန်ချလိုခြင်းမရှိ၍ဖြစ်သည်။ ရိုးရှင်းသော အကြောင်းအရာသာ ဖြစ်သည်။ စစ်မှန်သော ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူဖြစ်လာဖို့ မိမိ၏ အပြစ်ကို အမှန်တကယ်ဝန်ချတောင်းပန်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထိုအမှန်တရားကို ကျွန်ုပ်မဟောဘူး ဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်လည်း မှားယွင်းသောမှားယွင်းသော ဆရာသမားဖြစ်နေမည်။ မိမိ၏ဇာတိဆုံးရှုံးမှု မရှိဘဲ ခရစ်တော်ထံချဉ်းကပ်တိုးဝင်လျှက် ခရစ်ယာန်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ဟောကြားခြင်းက မှားယွင်း သောတရားဖြစ်မည်။ ခရစ်တော်ထံသင်ချဉ်းကပ်နိုင်ဖို့ ပေးဆပ်မှုရှိရမည်ဖြစ်သည်! ခရစ်တော်က ၎င်းနှင့်ပါတ်သတ်၍ မည်ကဲ့သို့မိန့်ကြားထားပါသနည်း? ကိုယ်တော်မိန့်တော်မူသည်ကား၊
“ထိုအခါတပည့်တော်တို့နှင့် ပရိသတ်များကို ခေါ်တော်မူပြီးလျှင်၊ အကြင်သူသည် ငါ၌ ဆည်းကပ်ခြင်းငှါ အလိုရှိ၏။ ထိုသူသည် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ငြင်းပယ်ရမည်။ ကိုယ့်လက်ဝါး ကပ်တိုင်ကိုထမ်း၍ ငါ့နောက်သို့လိုက်ရမည်။ အကြင်သူသည် မိမိအသက်ကို ကယ်တင် ခြင်းငှါ အလိုရှိ၏၊ ထိုသူသည် မိမိအသက်ဆုံးရှုံးလိမ့်မည်။ အကြင်သူသည် ငါ့ကြောင့်၎င်း၊ ဧဝံဂေလိတရားကြောင့်၎င်း၊ အသက်ရှုံး၏။ ထိုသူသည် မိမိအသက်ကို ကယ်ဆယ်လိမ့်မည်။ လူသည် ဤစကြာF၀ဠာကို အရူအးကင်းမဲ့အစိုးရ၍ မိမိအသက်ဝိညာဉ်ရှုံးလျှင် အဘယ်အကျိုး ကျေးဇူးရှိသနည်း။”(မာကု ၈း၃၄-၃၇)။
မိန့်တော်ချက်ကား၊ လုံလောက်တယ်မဟုတ်ပါလား? ခရစ်တော်ထံသင်ကပ်လိုပါက မိမိကိုမိမိ ငြင်းပယ်ရမည်၊ မိမိ၏အတွေးအခေါ်အကြံအစည်နှင့် ရည်ရွှယ်ချက်တို့ကို စွန့်လွတ်ရပါမည်။ ခရစ်တော်ထံသင် တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ရပါမည်။ ထိုသို့သင်သည် ခရစ်တော်ကို အသက်သခင်အဖြစ် ယုံကြည fလက်ခံရမည်။ ကိုယ်တော်ကို ယုံကြည်အားကိုးပါ ၊ မိမိကိုယ်ကိုယ်ကို ငြင်းပယ်ရမည်။ မိမိ အသက်တာကို ကိုယ်တော်၌ အပ်နှံထားပါ။ မိမိ၏အတွေးအခေါ်အယူအဆ၌ မိမိကိုမိမိ မအပ်နှံပါနဲ့၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ငြင်းပယ်လျှက်၊ ကိုယ်တော်ထံအပ်နှံပြီး အသက်တာထာ၀ရရှင်သန်ဖို့ ကိုယ်တော်အား ကိုးစားပါ။
နုတ်ထွက်စကားအရ “အညွန့်အတက်”ဆိုရာတွင် ခရစ်တော်သည် အသက်ကိုပေးစွမ်းနိုင်ခြင်းကို ဆိုလိုပါသည်။ လူသားအနေနှင့် အသက်ကို နုတ်ယူသူဟူ၍ မြင်ပေမည်။ ထို့ကြောင့် လူအများငြင်း ပယ်ခြင်းကို ခံရခြင်းဖြစ်၏။ မိမိတို့၏ဘ၀အသက်တာထဲက အသက်ကို “မနုတ်စေလို၍ဖြစ်”သည်! မိမိတို့အသက်ကိုစွန့်ပြီး ခရစ်တော်ဦးဆောင်မှုကို မလိုကြချေ။
၂။ ဒုတိယ၊ ခရစ်တော်ငြင်းပယ်ခံရသည့် အကြောင်းအရင်းမှာ၊ သွေ့ခြောက်သောမြေ၌ပေါက် သော အတက်ကဲ့သို့ ရူအးကလာ၍ဖြစ်သည်။
“ထာ၀ရဘုရား၏ကျွန်သည် အညွန့်ကဲ့သို့၎င်း၊ ခြောက်သွေ့သောမြေ၌ ပေါက်သောအတက် ကဲ့သို့၎င်း၊ ရှေ့တော်၌ကြီးပွား၏။”(ဟေရှာယ ၅၃း၁-၂)။
ပထမအကြောင်းအရာကို ကြာကြာဟောပြောသဖြင့်၊ အချိန်တော့ သိပ်မကျန်တော့ဘူး။ သို့သော် ခရစ်တော်သည် “သွေ့ခြောက်သောမြေ၌ ပေါက်သော”အပင်ကဲ့သို့ ရူအးကလာခြင်းကို ဆက်လေ့လာ ကြပါစို့။
“သွေ့ခြောက်သောမြေဆိုသည်မှာ၊ အစေခံကျွန်၏နှိမ့်ချစွာ ရူအးကလာခြင်းကို ဖော်ပြနေခြင်း ဖြစ်သည်ဆို၏။ အစေခံကျွန်တို့၏ဘ၀အခြေအနေ ဝမ်းနည်းဖွယ် ရှင်သန်ခြင်းကို ရည်ညွန်း ၏။ သွေ့ခြောက်သောမြေ၌ပေါက်သောအပင်ပမာ မိမိတို့ဘ၀ကို ကြိုးစားရုန်းကန်ခြင်းကို ဆိုလိုပါသည်ဟု ဆိုပါသည်။ (Young, ibid., p. 342).
ဤကြိုတင်ဟောပြောချက်သည် ခရစ်တော်ရူအးကလာခြင်းသည် မည်သို့ဆင်းရဲခြင်းနှင့် ကြုံရမည်ကို ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ မွေးစားဖခင်လက်သမားတစ်ဦးသာ ဖြစ်ခဲ့သည်။ မယ်တော်မာရိသည်လည်း ရိုးသားဖြောင့်မတ်သောသူ သူတော်စင်တစ်ဦးသာဖြစ်ခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်သည် နွားစခွက်ထဲ၌ ဖွေး ဖွားပြီး ဆင်းရဲသားကြားတွင် အသက်ရှင်လာခဲ့သူဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်၏တပည့်တော်တို့သည်လည်း ဆင်းရဲသားများဖြစ်သော တံငါသည်များဖြစ်ကြ၏။ ကိုယ်တော်ရှင်အား ရှင်ဘုရင် ဟေရုဒ်က ငြင်းပယ်ခဲ့သည်။ ရောမ ဧကရာဇ်မင်း ပိလတ်ကလည်း လက်မခံခဲ့ပါ။ ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ဖါရိ ရှဲများက “သွေ့ခြောက်သောအပင်၌ပေါက်သောအပင်” ကဲ့သို့ ရူအးကလာသောကိုယ်တော်ကို ငြင်းပယ်ကြ ပါသည်။ လူတို့သည် ကိုယ်တော်ကို သေလုနီးပါရိုက်ပုတ်ခဲ့ကြပြီး ခြေလက်တို့ကို သံမှိုဖြင့် ကားတိုင်၌ ကပ်ရိုက်ခဲ့ကြသည်။ ကျိုးပဲ့ကြေမွလျှက် သေနေသောအလောင်းကိုလည်း အငှါးသချို Fင်း ၌ မြှပ်နှံခဲ့ကြသည်။ ကိုယ်တော်သည် ဤလောက၌ အသက်ရှင်စဉ်တွင် သေခြင်းတိုင်ဆင်းရဲခြင်း ဒုက္ခများစွာထဲ အသက်ရှင်ခဲ့သဖြင့် “သွေ့ခြောက်သောမြေ၌ ပေါက်သောအပင်” ကဲ့သို့ အသက်ရှင် သွားခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်သည် မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်; “သွေ့ခြောက်သော မြေထဲမှ” သုံးရက်သော နေ့တွင် ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခဲ့ပါသည်! မျော်လင့်မထားသော မိုးသက်မုန်တိုင်းအပြီး ရှင်သန်နေ သောသစ်ပင်ပမာ၊ ခရစ်တော်လည်း သွေ့ခြောက်သောမြေထဲမှ ပြန်ထမြောက်ခဲ့၏။ ဟာလေလုယာ!
သို့တိုင်အောင် လူတို့ကို မယုံကြည်ခဲ့သေးပေ။ အသက်မဲ့၊ ဂျူးလူသေဟု ထင်ခဲ့ကြသည်။
“ငါတို့ဟောကြားသော သတင်းစကားကို အဘယ်သူယုံသနည်း။ ထာ၀ရဘုရား၏ လက် တော်သည် အဘယ်သူ့အားထင်ရှားတော်မူသနည်း။ ထာ၀ရဘုရား၏ ကျွန်သည် အညွန့်ကဲ့ သို့၎င်း၊ ခြောက်သွေ့သောမြေ၌ ပေါက်သောအတက်ကဲ့သို့၎င်း၊ ရှေ့တော်၌ကြီးပွား၏။ ပမာ ဏပြုစရာ အဆင်းတင့်တယ်ခြင်းမရှိ။ ချစ်လိုဖွယ်သောမျက်နှာလက္ခဏာနှင့် မပြည့်စုံ။”(ဟေရှာယ ၅၃း၁-၂)။
၃။ တတိယ၊ ခရစ်တော်ငြင်းပယ်ခြင်းခံရသည့်အကြောင်းမှာ၊ ပမာဏပြုစရာ အဆင်းတင့် တယ်ခြင်းမရှိ၊ ချစ်လိုဖွယ်သောမျက်နှာ လက္ခဏာနှင့်မပြည့်စုံ၍ ဖြစ်သည်။
ကျေးဇူးပြု၍ အပိုဒ်ငယ် နှစ်ကို အသံကျယ်ကျယ်ဖတ်ကြစို့။
“ထာ၀ရဘုရား၏ ကျွန်သည် အညွန့်ကဲ့သို့၎င်း၊ ခြောက်သွေ့သောမြေ၌ ပေါက်သော အတက်ကဲ့သို့၎င်း၊ ရှေ့တော်၌ကြီးပွား၏။ ပမာဏပြုစရာ အဆင်းတင့်တယ်ခြင်းမရှိ။ ချစ် လိုဖွယ်သောမျက်နှာလက္ခဏာနှင့် မပြည့်စုံ။” (ဟေရှာယ ၅၃း၁-၂)။
ယေရှု၌ အပြင်သဏ္ဍာန်ပမာဏပြုစရာ အဆင်းတင့်တယ်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ဒေါက်တာယန်းပြော ကြားခဲ့သည်မှာ၊ “အစေခံကျွန်ခရစ်တော်၌ ချစ်လိုဖွယ်သောမျက်နှာ လက္ခဏာ ကျွန်ုပ်တို့မတွေ့ရပါ။ အပြင်သဏ္ဍာန်တွင်ကား၊ မျှတမှု၊ အမှန်တရားမရှိ ဖြစနေသည်။ ဝမ်းနည်းစရာ ပုံရိပ်ဖြစ်နေပါသည်။ အစေခံကျွန်ခရစ်တော်သည် မိမိ၏လူစုထဲ၌ အသက်ရှင်ခဲ့သည်။ ယုံကြည်ခြင်းမျက်စိဖြင့်သာ စစ်မှန် သောဘုန်းတော်ကို မြင်တွေ့နိုင်၏။ အပြင်သဏ္ဍာန်ကို ဣသရေလလူတို့ကြည့်သောအခါ ချစ်လို ဖွယ်သောမျက်နှာ မတွေ့ခဲ့ကြပေ။ အစေခံကျွန်ခရစ်တော်သည် လူသားတို့၏ မှားယွင်းသောတရားစီ ရင်ခြင်းကို သေသည့်တိုင် ခံတော်မူခဲ့သည်။ (Young, ibid.).
အပြင်သဏ္ဍာန်၌ကား ယေရှု၌ချစ်လိုဖွယ်ကောင်းသောဆွဲဆောင်မှု ကမ္ဘာလူသားတို့အဖို့ မရှိခဲ့ပေ။ လူတို့၏ဆွဲဆောင်မှုကို ပေးမသွားခဲ့ပေ။ အောင်မြင်ခြင်း၊ ကျော်ကြားခြင်း၊ ငွေကြေးချမ်းသာခြင်း၊ လောကီစည်းစိမ်ခံစားမှုကို ပေးမသွားခဲ့ပေ။ အတော့ကို ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်၏။ ဤဝတ်ပြုအစ၌ မစ္စတာ ပပြုဟုန်း ဖတ်ကြားခဲ့သောကျမ်းချက်သည် ခရစ်တော်ပေးသော အရာရာများသာ ဖြစ်သည်။
မိမိကိုမိမိ ငြင်းပယ်ဖို့ ခရစ်တော်မိန့်ကြားခဲ့သည်။ ခရစ်တော်က မိမိကိုမိမိ မငြင်းပယ်ပါက အသက်ရှုံးမည်ဟု မိန့်တော်မူပါသည်။ ခရစ်တော်က ထာ၀ရအသက်၊ အပြစ်ခွင့်လွတ်ခြင်းနှင့် ကယ်တင်ခြင်းဆုကျေးဇူးကို ချပေးထားသည်။ လူသားတို့မျက်စိဖြင့်မမြင်၊ စိတ်နှလုံးခံစားချက်ဖြင့် နားမလည်နိုင်သောနက်နဲသောအရာ လက်ဖြင့်ထိ၍ရသောအရာ မဟုတ်သောဝိညာဉ်သဘာ၀ကိုသာ မိန့်ကြားခဲ့သည်။ အတွင်းမျက်စိကို ဘုရားသခင်မဖွင့်ပေးသောသူတို့က ခရစ်တော်ကို ငြင်းပယ်ခဲ့ကြ ဖြင်းဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ၊
“ဇာတိပကတိလူသည် ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်အရာတို့ကို မခံမယူ။ ထိုအရာတို့သည် မိုက်မဲ သောအရာဖြစ်သည်ဟု ထင်တတ်၏။ ထိုအရာတို့ကို ဝိညာဉ်အရာအားဖြင့်သာ ပိုင်းခြား၍ နားလည်နိုင်သောကြောင့်၊ ဇာတိပကတိလူသည် နားမလည်နိုင်။”(၁ကော ၂း၁၄)။
ယနေ့မနက် ထာ၀ရဘုရားက တစုံတစ်ဦးအား စကားပြောမမည်ဟု ယုံကြည်ပါတယ်။ “ချစ်လို ဖွယ်သောမျက်နှာလက္ခဏာမရှိသော်လည်း သင့်အား သားတော်ယေရှုထ Hပို့ဆောင်ပေးမည်ဟု ဘုရား သခင်မိန့်တော်မူမည်ကို ယုံကြည်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောခံစားချက်မျိုး မိတ်ဆွေခံစားဖူးပါသလား? ဤကမ္ဘာကြီးက ပျော်စရာကောင်းသော အောင်မြင်မှုများကို မပေးစွမ်းနိုင်ဟု သင်ခံစားဖူးပါသလား? သင်ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်နှင့် ပါတ်သတ်ပြီး စဉ်းစားတွေးခေါ်ခဲ့ဖူးပါသလား? ယေရှုအတွေးတော်အားဖြင့် သင့်အပြစ်ကို ဆေးကြောခြင်းမရှိဘဲ သင့်ဘ၀နိဂုံးဘယ်အရပ်၌ ချူပ်ငြိမ်းမည်ကို သင်စဉ်းစားဖူးပါ သလား? ဤအကြောင်းအရာကို သင်စဉ်းစားခဲ့ဖူးပြီလား? အကယ်၍သင် ဤအကြောင်းအရာကို မစဉ်းခဲ့ဖူးပါက ချစ်လိုဖွယ်သော အဆင့်တင်းတယ်ခြင်းမရှိ၊ ချစ်လိုဖွယ်သောမျက်နှာမရှိသော ယေရှု ထံ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် သင်တိုးဝင်ပါမည်လား? (ဟေရှာယ ၅၃း၂)။ နာဇရက်မြို့သားယေရှုရှေ့တွင် ဒူးထောက်လျှက် တိုးဝင်ခဉ်းကပ်ပါမည်လား? ထိုသို့လုပ်ဆောင်မည့် သူတို့အဖို့ ကျွန်ုပ်ဆုတောင်း ပေးပါမည်။
မစ္စတာ ဂရိဖက်စ်နှင့်အတူ မတ်တပ်ရပ်လျှက်၊ ကျေးဇူးပြု၍ ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် သီဆိုသွား သောသီချင်း၏ အပိုဒ်နှစ်ပိုဒ်ကို သီဆိုကြပါစို့လား၊
လောကီကိုစွန့်လျှက်၊ ယေရှုနာမတော်မြတ်၍ ဝမ်းသာနာမတော်ကား အစဉ်အမြဲထာ၀ရ တည်ရှိနေမည် အစဉ်၊
လောကီကိုစွန့် ယေရှုကားတိုင်တော်ကို ကိုးစား
ယေရှုကိုယ်တော်အား မျက်စိဖြင့် တွေ့မည်
ဂရုဏာအစဉ်အမြဲ၊ မေတ္တာတော်အတိုင်းထက်အလွန် ကြီးမား!
(၁၈၂၀-၁၉၁၅ ဖန်နီး ဂျေ. ဂရော့ဘီ သီကုံးသော “ယေရှုရှင်အားပေးသနား”)။
အကယ်၍ ဘုရားရှင်က သင်ရဲ့စိတ်နှလုံးသားထဲ စကားပြောသံကြားရပါက လောကီစည်းစိမ်ကို စွန့်၍ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ယေရှုခရစ်တော်ထံ မိမိကိုယ်ကို မိတ်ကပ်အပ်နှံထားပါ။ အသွေးတော်ဖြင့် ဆေးကြောပါ။ အကယ်၍ ၎င်းကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းနှင့် ပါတ်သတ်၍ ဆွေးနွေးလိုပါက၊ ဆွေးနွေးခန်းထဲသို့ သင်တို့သွားရောက်နိုင်ကြမလား? ဒေါက်တာဂေဂန်က ဦးဆောင်ပြီး ဆွေးနွေးတိုင် ပင်ပေးပါလိမ့်မည်။ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ယေရှုခရစ်တော်ကို သင်ယုံကြည်နိုင်ပါမည်အကြောင်း ကျွန်ုပ်ဆုတောင်းပေးပါသည်။ ထိုဆွေးနွေးခန်းထဲသို့ သွားရောက်ကြမည့်သူတို့အဖို့ ကျေးဇူးပြု၍ ဒေါက်တာချန်မှ ဆုတောင်းပေးပါ။ အာမင်!
-ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် မစ္စတာ အေဘေလ် ပရိုဟုန်းမှ ရှင်မကု ၈း၃၄-၃၇ကို ဖတ်ကြားပေးပါ သည်။
-ဒေသနာတော် မတိုင်ခင် မစ္စတာဘင်ဂျင်မင် ခင်ကိတ်ဂရိဖက်စ်မှ (၁၈၂၀-၁၉၁၅
ခုနှစ် ဖန်နီး ဂျေဂရောဘီ သီကုံးရေးသားသော “ယေရှုကိုပေးသနား”
(ယောဟန် ၁၂း၃၇-၃၈)၊ (ရောမ ၁ဝး၁၂၊ ၁၆)၊ (ရှင်မဿဲ ၇း၁၄)၊
(လုကာ ၁၃း၂၄)၊ (တမန်တော် ၈း၃၀-၃၁)၊ (ယောဟန် ၁း၁၁)။
၁။ရညဘျစးပထမ၊ ခရစ်တော်သည် ငြင်းပယ်ခြင်းကို ခံရသည့်အကြောင်းမှာ၊
အညွန့်ကဲ့သို့၊ အတက် ကဲ့သို့ ရူအးကလာခြင်းကြောင်းဖြစ်၏။
(ဟေရှာယ၅၃း၂)က၊ (ယောဟန် ၁၁း၄၈)၊ (မာကု ၈း၃၄-၃၇)
၂။ရညဘျစးဒုတိယ၊ ခရစ်တော်ငြင်းပယ်ခံရသည့် အကြောင်းအရင်းမှာ၊
သွေ့ခြောက်သောမြေ၌ ပေါက် သော အတက်ကဲ့သို့
ရူအးကလာ၍ဖြစ်သည်။ (ဟေရှာယ ၅၃း၂)ခ။
၃။ရညဘျစးတတိယ၊ ခရစ်တော်ငြင်းပယ်ခြင်းခံရသည့်အကြောင်းမှာ၊ ပမာဏပြုစရာ
အဆင်းတင့် တယ်ခြင်းမရှိ၊ ချစ်လိုဖွယ်သောမျက်နှာ
လက္ခဏာနှင့်မပြည့်စုံ၍ ဖြစ်သည်။ (ဟေရှာယ ၅၃း၂)ဂ၊
(မာကု ၈း၃၄-ဘြွမ ။၃ြွ၇)၊ (၁ကော ၂း၁၄)။